izintokazi Modern yakhetha ezihlukahlukene ukuhlobisa izinwele zabo. Girls nge izinwele iqonde sengathi ukoma futhi uthole nezinwele ezinde egeleza. Curly ngesingami ngifuna, kunalokho, abe ubuhle pryamovolosymi. Kuzo zombili lezi zimo kukhona umzabalazo esebenzayo nemvelo. Lesi sihloko uzokutshela ukuthi singenza emangalisa zezinwele. Kare curls ukuhlobisa kakhulu. Curls wengeze nento yalesi ukugunda izinwele lulwimi eside.
Isimo main laying
Ngaphambi indlela yokwenza curls ku isikwele noma yimuphi omunye kwekhanda, kumelwe kahle uhlanze izinwele. Vele ugeze izinwele zakho nge imoto efanelekayo. Ungakhohlwa ukusebenzisa namafutha-conditioner noma-moya. Lezi izingoma uzokwenza curls yakho ukulawuleka kakhudlwana futhi ezithambile. Futhi, eziningi zalezi compounds ukusiza ekuvuseleleni izindawo izinwele ezilimele ngaphambili.
Ngemva kokugeza, ngomusa uyakwesula izinwele ngethawula. Kuye ngokuthi lakhiwe kanjani udala, uzodinga ome noma ushiye izinwele zakho ezimanzi. Ingalo wena nge amathuluzi atholakalayo futhi isitayela ejenti. Kunezindlela eziningana ukwenza curls esigcawini. Ake sihlole kubo.
Ukusetshenziswa si futhi mousses
Ngaphambi ukwenza curls ku isikwele nge le ndlela, kumelwe unqume on izinwele zakho uhlobo. Ukuze mncane futhi abangalawuleki kuwufanele ukuthatha isitayela gel izidakamizwa. curls uqweqwe esintamo mousse ofanelekayo.
Ngaphambi kokufaka isicelo ukubunjwa isidingo izinwele ezimanzi. Uma uke wageza nje-ke, wena-ke lula umsebenzi wakho. Nekama ukubhuqa futhi zisebenza esincane isitayela, kancane esebohlile kusukela ezimpandeni. Ngemva kwalokho isandla akuqede izinwele bakushiye kulesi sifundazwe ukuze ome. Uma ungenalo isikhathi, sebenzisa hairdryer. Kodwa-ke kuhle ukucabangela ukuthi kulokhu izinwele kuyoba Fluffy ngaphezulu.
Indlela elula yokwenza curls ku isikwele - ukusebenzisa ngefaskamu. Uma izinwele zakho kuba esilalelayo futhi kalula kugcina ezakheke, asikho isidingo ukusebenzisa imikhiqizo isitayela. Kwezinye izimo, pre fafaza inhloko izinwele fixative spray.
Khetha ngefaskamu ngobukhulu kuye umphumela oyifunayo. I emikhulu iyoba ubungako bawo, curls ukukhanya okwengeziwe isikwele uthola. Uma uthatha le amahhanisi, khona-ke kuyoba curls esihle naughty. Ungasebenzisa futhi ezinamasondo ashisayo. Isenzo sabo iyafana ekusebenzeni curling. Ngaphambi ukusebenzisa, kumele zinsizakuphila kushiswa epanini ngamanzi. Ukoma izinwele idinga izikhathi ezahlukene. Termobigudi adinga imizuzu engaba ngu-20. Phakathi nale nkathi ungaya mayelana nebhizinisi lakho. Curler Velcro wenze Perm izinwele ezinhle ezimanzi emva kokuba wawusomile. Ungase futhi zihambisane inqubo ngokusebenzisa umshini wokomisa izinwele. Plaits akukhetha ukugqoka futhi ahlubule ngaphambi kokulala ekuseni.
Curls phezu Quads kungenziwa ngosizo heater kagesi. Manje mass ekhiqizwa ngamaketanga futhi ploek ahlukahlukene. Bazokusiza ekuvuleni ukudala isithombe sakho imizuzu embalwa.
Uma usebenzisa i-curling ezivamile, wahlukanise encane imicu ukubhuqa futhi wenze Perm ngamunye. Uma une idivayisi zanamuhla for a wave, udinga nje unamathisele ucezu izinwele futhi ulinde imizuzwana embalwa. Ungakhohlwa silungise curls kusetshenziswa lacquer.
Kulula Square wave
Uma ungenayo izindlela ukudala curls ke ungalilahli ithemba. Ungakwazi ukwenza ezisontene. Ukuze wenze lokhu, thatha elula hairspray. Ukwehluka kushe kwesigaba amancane ukuyihlanganisa ngomunwe wakhe. Futha upende bese ulinda imizuzwana embalwa. Khona-ke ukudedela zinyakaze bese ukwenza okufanayo engumucu eduze. Lapho wonke sithombe zidalwe, ngomusa phehla izinwele ngeminwe yakho. It is ibuye Kunconywa waphinda fafaza izinwele lacquer ukukhiywa esithambile.
Uma wenza kanjalo curls ku isikwele, kubalulekile ukugcina izincomo eziyisisekelo. Kulokhu, izinwele ngeke sijabulise isikhathi eside nawe.
Ungalokothi nekama izinwele zakho ngemva kokubhaliswa kwabo.
Musa ugqoke izigqoko, okuyinto kungalimaza kakhulu ukuma kwekhanda. Uncamela isikhafu mahhala futhi kwenzakalani.
Ngo abandayo ezimanzi sezulu ekhanda izinwele kungaba ewa ngokushesha. Ukuze ugweme lokhu, njalo ukugqoka hairspray kancane. Futhi, uma uthanda, ungakwazi ukushintsha spray.
Kwaphinda ingamthinti izinwele zami.
Carry gum noma hairpin. Endabeni ka umonakalo of izinwele izitayela ungahlala silungise ukubhuqa. Kuyaphawuleka ukuthi bahlangana curls ku nezinwele ezimfishane ayibukeki kancane umxhwele nenhle.
Ngaphambi kokulala ngempela nekama isitayela wadala. Le nqubo ulusizo uhlikihla ekhanda, ekhuthaza izinwele zikhula zibheke ngakhona. Kubalulekile ukuhlanza izinwele kusukela ukutayela ayesebenza kuwo.
Ukuze wenze isitayela esisha, njalo ulandela isimo main - isebenza kuphela izinwele ahlanzekile. Kungenjalo, kwekhanda uyobheka inobudlabha.
Ukuze wenze curls ku isikwele - omunye imisebenzi kakhulu elula. nzima kakhulu qondanisa ezisontekile noma Perm ukudala izinwele ezinde. Uma ufuna ukusebenza nehlala njalo, kungenzeka ukusebenzisa nabavoti zamakhemikhali. Kulokhu, igagasi akho eyosigcina ezinyangeni ezimbalwa. Nokho, ezikhulayo izinwele usazoba ngqo. Akubalulekile ukuba ngokuzimela ukukhiqiza Ekuhloleni okufanayo. Cela usizo abalungisa izinwele kanye stylists. Yiba ezahlukene, ukushintsha, ukudala izithombe ezintsha futhi ukuhlola. Njalo uhlale enhle futhi kukhanga!
Multistayler Remington S8670: idivayisi jikelele izinwele isitayela
I-Cocochoco: impendulo iyindlela engcono kakhulu yokuqonda ukuthi uyayidinga noma cha
Square face - ukhethe kwekhanda
Carving Wabasaqalayo. isisekelo
Pilaf yengulube multivarka: isikhathi imali kanye imiphumela engcono
Indlela Pheka lecho nge izaqathe ebusika?
Lapho esetshenziswa insemination intrauterine?
Indlela yokufunda ukwenza i-somersault ekhaya: izici zohlelo
Ihhotela Umkhaya kuyona (Evpatoriya): izithombe kanye nokubuyekeza
"Kabusha Kosygin" - nomlando